Wiil sawir qaade ahaa oo lagu dilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Wiil sawir qaade ahaa oo lagu dilay Muqdisho
Wiil dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalada Muqdisho, islamarkaana ahaa sawir qaade ayaa lagu dilay degmada Howl-wadaag ee Gobolka Benaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjooge yaal ah wiil dhallinyaro ah oo kamida dhallinyarada sawir qaadayaasha ah ee duuba aroosyada ayey koox hubeysani ku dhex toogteen gudaha xaruntiisa shaqo ee degmada Howl-wadaag.
AUN Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Awalad Yare, waxa uuna ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku shaqeysta xirfadda sawir qaadidda iyo muuqaal duubista, Istuudiyo uu ku lahaa meel u dhaw Baarkii la oran jiray Baar Bakiin ee degmada howl wadaag ayaa lagu dhex toogtay marxuumka.
Warar goor dambe soo baxay ayaa sheegaya inuu ahaa sidoo kale sawir qaadaha taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Janaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ma jiro wax wara oo kasoo baxay laamaha ammaanka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo uu la shaqeynayay Marxuumka inta aan la dilin.
Daqiiqado kaddib markii uu dhacay falka dilka ah ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo boolis ah kuwaasoo baaritaano ka wada halka uu falku ka dhacay inkastoo ay baxsadeen gooxdii falkan geysatay oo loo maleenayo in ay yihiin kooxda Al-Shabaab.